musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Tel Aviv kuenda kuDubai: ndege nyowani neEmirates
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Israel Breaking News • nhau • kutakura • Kufamba Wire Nhau • UAE Kuputsa Nhau
Emirates nhasi yazivisa kuti ichatanga rwendo rwemazuva ese rusingamire pakati peDubai neTel Aviv, Israel, kutanga 6 Zvita.
Tel Aviv neDubai zvichabatanidzwa nendege itsva isingamire zuva nezuva neEmirates Airlines.
Ndege itsva dzichabatanidza Tel Aviv nemagedhi makumi matatu eEmirates kupota Nyika.
Emirates SkyCargo ichapa matani makumi maviri ekutakura zvinhu nzira imwe neimwe pakati peTel Aviv neDubai.
Danho iri rinouya apo UAE neIsrael dziri kuramba dzichivandudza kudyidzana kukuru kwehupfumi kufambisa kukura muzvikamu zvakasiyana-siyana, pamwe nekuwedzera kuyerera kwekutengeserana pakati penyika mbiri. Nendege nyowani dzezuva nezuva, vafambi veIsrael vachakwanisa kubatana zvakachengetedzeka, zvisina musono uye nemazvo kuDubai, uye kuburikidza neDubai kuenda kuEmirates' global nzira network inopfuura zana nemakumi maviri. Nguva dzekubhururuka kuenda/kubva kuTel Aviv dzinopa vafambi mukana nyore kuenda kunzvimbo dzekutandarira dzinopfuura Dubai seThailand, Indian Ocean Islands neSouth Africa, pakati pezvimwe.
Uyezve, ndege itsva idzi dzinounza hukama huri nyore kuTel Aviv kubva pedyo ne30 Emirates gedhi mhiri kweAustralia, United States, Brazil, Mexico, India neSouth Africa, dzose kumusha kune dzimwe nharaunda huru dzechiJudha pasi rose. Vafambi vanobva kuUnited States vachitsvaga kumira muDubai vasati vatanga rwendo rwavo rwekuenda kuTel Aviv vanogona kuwana iyo Dubai Stop Over package, inosanganisira kugara mumahotera epasi rose, kuona nzvimbo, uye zvimwe zviitiko.
Dubai zvakare inoenderera mberi nekukwezva vafambi vekuzvivaraidza kubva kuIsrael nerondedzero yayo inoramba ichiwedzera yezviitiko, kusanganisira kugamuchira Expo 2020 Dubai iyo yakakwevera mukushanya kunodarika mamirioni maviri mumwedzi wayo wekutanga. Israel iri kutora chikamu paExpo 2 Dubai ine nyika yayo pavilion pasi pedingindira rinoti '.kubatanidza pfungwa - kugadzira ramangwana'.
Ndege itsva dzeEmirates dzichawedzerawo kubatana kwenharaunda dzebhizinesi munyika mbiri idzi, kugadzira nzira nyowani dzetiweki nekugadzira mikana yekudyara mumaindasitiri. Nekuvhurwa kwekufambisa vhiza-yemahara pakati penyika mbiri uye kurerutswa kwezvirambidzo mukati meEmirates network, masevhisi matsva anosangana nezvinodiwa zvekufamba mune ramangwana mukati nekubuda muTel Aviv.
Ndege ichaendesa ndege yayo yemazuva ano yeBoeing 777-300ER mugadziriro yemakirasi matatu, ichipa masutu ega ega muClass Class, zvigaro zvakati sandara muBusiness Class uye zvigaro zvakakura muEconomy Class kuti zvishandire vatengi munzira iri pakati peDubai neTel Aviv. Ndege dzezuva nezuva dzakarongwa kubva kuDubai seEK931 na14:50hrs, dzichisvika paBen Gurion Airport na16:25hrs nguva dzemuno. Ndege yekudzoka EK 932 ichasimuka muTel Aviv na18:25hrs, ichisvika muDubai na23:25hrs nguva dzemuno.
Vatengi veEmirates vanozobatsirwawo kubva mumubatanidzwa wendege wecodeshare neflydubai. Iyo codeshare inopa vafambi nepfupi uye isina musono yekubatanidza kubva kuDubai kunongedza kune yakasanganiswa network yevaviri vatakuri, ayo nhasi ane mazana maviri negumi ekuenda munyika zana.
Iyo ndege ichaisa ndege yayo yemazuva ano yeBoeing 777-300ER mumhando yemhando nhatu, ichipa masutu ega ega muFirst Kirasi, zvigaro zvakafuratira muBusiness Kirasi uye zvigaro zvakakura muEconomy Kirasi.
Adnan Kazim, Chief Commercial Officer, Emirates Airline akadaro: “Emirates inofara kuzivisa Tel Aviv, imwe yemagedhi akakosha edunhu, senzvimbo yayo nyowani yekuenda. Nekutanga kwesevhisi mumavhiki mashoma, Emirates ichapa dzimwe sarudzo dzevafambi kuti vabhururuke zvirinani kuenda nekubva kuTel Aviv kuburikidza neDubai. Isu tinotarisirawo kutambira mamwe mabhizinesi nevafambi vekutandara kubva kuIsrael kuenda kuDubai, uye kuenda kune dzimwe nzvimbo paEmirates' network.
Akawedzera kuti: "Tinoda kutenda UAE nevakuru veIsrael nerutsigiro rwavo, uye takamirira mukana wekushandira Israeri uye kuvhura tarisiro yekuti nyika mbiri idzi dzirambe dzichivaka hukama hwakasimba pakukura kwebhizinesi nekuwedzera kushanya munguva pfupi iri kutevera."
Pamusoro pekuita zvevatakuri, Emirates SkyCargo ichapa matani makumi maviri ekutakura zvinhu nzira imwe neimwe pakati peDubai neTel Aviv paBoeing 20-777ER kutsigira kutengeswa kwemishonga, zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, miriwo nezvimwe zvinoparara kubva kuTel Aviv kunze kwenyika. Ndege idzi dzinotarisirwawo kutakura kugadzira zvigadzirwa uye zvinhu, semiconductors uye e-commerce mapasuru kupinda muIsrael.
Vafambi vanoenda nekubva kuIsrael vanogona kutarisira kusangana neEmirates' yekuhwina-mubairo sevhisi uye indasitiri inotungamira zvigadzirwa mumhepo uye pasi pamakirasi ese, nendiro dzakafemerwa mudunhu uye zvinwiwa zvemhando yepamusoro, pamwe nesarudzo yekudya kwekosher pabhodhi. Iyo ndege ice inflight varaidzo system inopa anopfuura zviuru zvina nemazana mashanu zviteshi zvevaraidzo zvinodikanwa mumitauro inopfuura makumi mana, kusanganisira mafirimu, terevhizheni, uye raibhurari yakakura yemimhanzi pamwe nemitambo, mabhuku ekuteerera uye podcasts.
Emirates yakadzoreredza zvizere Middle East network uye parizvino inobhururuka kuenda kumaguta gumi nemaviri mudunhu rese.
Tel Aviv iguta reIsrael rakakura uye rine vanhu vakawanda, uye inzvimbo yehupfumi uye tekinoroji yenyika. Guta rakakwezva vanopfuura mamirioni mana neshanu vashanyi muna 4.5, sekureva kweIsrael Ministry of Tourism. Tel Aviv inozivikanwa nemhenderekedzo dzayo dzakachena, nzvimbo yekudyara inoyevedza, zviono zvetsika, uye muunganidzwa mukuru wepasirese wezviuru zvina siginecha zvichena zveBauhaus style zvivakwa, zvave UNESCO World Heritage Site. Guta iri zvakare inzvimbo yepamberi yesainzi uye tekinoroji yekupayona, ine bhizimusi rakasimba uye kutanga-up ecosystem yakagadzira hunyanzvi uye zvigadzirwa zvakagamuchirwa kutenderera pasirese uye nepakati pechikamu chezvikamu.
Vatengi vanoenda nekubva kuIsrael vanorairwa kuti vatarise zvazvino zvinodiwa pakufamba pano